စမ်းသပ်ချက်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားရှိလာ။ သို့သော်ဤကွဲပြားမှုရှိနေသော်လည်းသုတေသီများဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်များနှင့်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်များအကြားတစ်ဦးစဉ်ဆက်တစ်လျှောက်စမ်းသပ်ချက်စုစည်းဖို့ကအထောက်အကူဖြစ်စေတွေ့ပြီ။ သို့သျောယခုသုတေသီများလည်း Analog စစမ်းသပ်ချက်များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်များအကြားတစ်ဦးစဉ်ဆက်တစ်လျှောက်စမ်းသပ်ချက်စည်းရုံးသင့်ပါတယ်။ ဒီ Two-ရှုထောင်ဒီဇိုင်းအာကာသသင်ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှု၏အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုနားလည်အကြီးမြတ်ဆုံးအခွင့်အလမ်း (ပုံ 4.1) ၏ဒေသများတွင်အကြံပြုကူညီပေးပါမည်။
ပုံ 4.1: စမ်းသပ်ချက်အဘို့ဒီဇိုင်းအာကာသသိထား။ အတိတ်ကာလ၌, စမ်းသပ်ချက်အဓာတ်ခွဲခန်း-Field အတိုင်းအတာတစ်လျှောက်ကွဲပြား။ အခုတော့သူတို့ကိုလည်း Analog စ-ဒစ်ဂျစ်တယ်အတိုင်းအတာအပေါ်ခြားနားသည်။ ကျွန်တော့်အမြင်တွင်, အကြီးမြတ်ဆုံးအခွင့်အလမ်းများ၏ဧရိယာဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အတိတ်ကာလ၌, သုတေသီများစမ်းသပ်ချက်ဖွဲ့စည်းသောအဓိကနည်းလမ်းဓာတ်ခွဲခန်း-Field အတိုင်းအတာတစ်လျှောက်ခဲ့သည်။ လူမှုရေးသိပ္ပံစမ်းသပ်ချက်များအများစုဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကိုသင်တန်းကိုအကြွေးများအတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာထူးဆန်းတဲ့တာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ဘယ်မှာဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်လူမှုရေးအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. အလွန်တိကျတဲ့သီအိုရီကိုစမ်းသပ်ဖို့ဒီဇိုင်းကအလွန်တိကျသောကုသမှုကိုဖန်တီးရန်သုတေသီများကနိုင်ပါတယ်သောကွောငျ့စမ်းသပ်မှု၏ဤအမျိုးအစားစိတ်ပညာသုတေသနလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်။ အချို့သောပြဿနာများအတွက်, သို့သော်, တစ်ခုခုထိုကဲ့သို့သောပုံမှန်မဟုတ်သော setting ကိုထိုသို့သောပုံမှန်မဟုတ်သောတာဝန်များကိုဖျော်ဖြေထိုကဲ့သို့သောပုံမှန်မဟုတ်သောလူမှလူ့အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ခိုင်ကောက်ချက်ဆွဲအကြောင်းကိုနည်းနည်းထူးဆန်းပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများလယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်ဆီသို့တစ်ဦးလှုပ်ရှားမှုမှဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုပိုပြီးသဘာဝက setting တွင်ပိုမိုဘုံတာဝန်များကိုဖျော်ဖြေ, သင်တန်းသားများကိုပိုမိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များနှင့်ကျပန်းထိန်းချုပ်စ​​မ်းသပ်ချက်၏ခိုင်ခံ့သောဒီဇိုင်းကိုပေါင်းစပ်။
လူတချို့ယှဉ်ပြိုင်နည်းလမ်းများအဖြစ်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်များထင်ကြပေမဲ့, ကကွဲပြားခြားနားတဲ့အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုနှင့်အတူဖြည့်စွတ်နည်းလမ်းများအဖြစ်သူတို့အထင်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Correll, Benard, and Paik (2007) ၏သတင်းရင်းမြစ်ကိုရှာဖွေရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများနှင့်လယ်စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြု "မိခင်ပြစ်ဒဏ်။ " အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, မိခင်များတသက်လုံးသားမရဘဲနေအမျိုးသမီးတွေထက်လျော့နည်းငွေရှာ, သောအခါ၌ပင် အလားတူကျွမ်းကျင်မှုအလားတူအလုပ်အကိုင်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်အတူအမျိုးသမီးတွေနှိုင်းယှဉ်။ အဲဒီမှာဒီပုံစံအဘို့များစွာသောဖြစ်နိုင်သောရှင်းလင်းချက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တစ်အလုပ်ရှင်များမိခင်များဆန့်ကျင် biased ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ (စိတ်ဝင်စားစရာဆန့်ကျင်ဘက်သည်ဘိုးဘေးတို့အဘို့စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ဟန်: သူတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်တသက်လုံးသားမရဘဲလူတို့ထက် ပို. ဝင်ငွေလေ့) ။ ထိုဓါတ်ခွဲခန်းအတွက်တဦးတည်းနှင့်လယ်ပြင်၌တဦးတည်း: မိခင်များဆန့်ကျင်ဖြစ်နိုင်သောဘက်လိုက်အကဲဖြတ်ရန်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်စပ်မှုနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်နှစ်ဦးစမ်းသပ်ချက်သို့ပွေးလေ၏။
ပထမဦးစွာတစ်ဦးဓါတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုအတွက်ဆက်စပ်မှုနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တစ်ဦးကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက် Start-up ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီက၎င်း၏အသစ် East Coast စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနဦးဆောင်လမ်းပြဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေနဲ့အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးပို့ချခဲ့ကွောငျး, ကောလိပ်ဘွဲ့ကြိုခဲ့ကြသူ, သင်တန်းသားများကပြောသည်။ ကျောင်းသားများကုမ္ပဏီကငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်သူတို့ရဲ့အကူအညီလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်ကြပြီးအများအပြားအလားအလာကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နဲ့ထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏ထောက်လှမ်းရေး, နွေးထွေးမှု, နှငျ့အလုပျမှကတိကဝတ်အဖြစ်ရှုထောင့်တစ်အရေအတွက်အပေါ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲခိုင်းခဲ့သည်။ သူတို့ကလျှောက်ထားသူနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့တစ်တွေစတင်ပြီးလစာအဖြစ်အကြံပေးလိုငှားရမ်းဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်လိုလျှင်ထို့ပွငျ, ကျောင်းသားများကိုမေးခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသားများမသိလိုက်ဘူး, သို့သော်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အထူးတစ်ချက် မှလွဲ. အလားတူဖြစ်ဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်: အကိုယ်ရေးရာဇဝင်အချို့ကို (မိဘတစ်ဦး-ဆရာအသင်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုစာရင်းဖြင့်ဖြစ်စေ) မိခင်အချက်ပြနှင့်အချို့သောမကိုပြု၏။ ဆက်စပ်မှုကျောင်းသားများမိခင်များငှားရမ်းဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသူတို့နှင့်အနိမ့်စတင်လစာကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ထို့ပြင်သတ်မှတ်ရေးနှင့်ငှားရမ်း-related ဆုံးဖြတ်ချက်များနှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှတဆင့်ဆက်စပ်မှုမိခင်များ '' အားနည်းချက်များအကြီးအကျယ်မိခင်များအရည်အချင်းကိုနှင့်ကတိကဝတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌နိမ့် rated ခဲ့ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့သည်ခဲ့ကြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆက်စပ်မှုကဤစရိုက်များမိခင်များချို့တဲ့နေသောတဆင့်ယန္တရားဖြစ်ကြောင်းစောဒကတက်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုဆက်စပ်မှုနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တစ်ဦးကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှင်းပြချက်များကိုခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, တဦးတည်းဖြစ်နိုင်မယ့်အချိန်ပြည့်အလုပ်ခဲ့ဖူးဘူးသူအရာရှိတစ်ဦးအနည်းငယ်ဘွဲ့ကြို၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ခုလုံးကိုအမေရိကန်လုပ်သားစျေးကွက်နှင့် ပတ်သက်. ကောက်ချက်ဆွဲ ပတ်သက်. သံသယဖြစ်စေတယောက်တည်းကလူကိုငှားရမ်းခြင်းငှါ, ။ ထိုကွောငျ့, ဆက်စပ်မှုနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်လည်းဖြည့်စွတ်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသုတေသီများအတုအဖုံးအက္ခရာများနှင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက်ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်ကြော်ငြာအလုပ်လစ်လပ်ရာပေါင်းများစွာမှတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုဘွဲ့ကြိုဖို့ပြထားတဲ့ပစ္စည်းများဆင်တူ, အခြို့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မိခင်အချက်ပြနှင့်အချို့သောမကိုပြု၏။ ဆက်စပ်မှုနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်မိခင်များအညီအမျှအရည်အချင်းပြည့်တသက်လုံးသားမရဘဲနေအမျိုးသမီးတွေထက်အင်တာဗျူးတွေအဘို့အပြန်ကိုခေါ်ရလျော့နည်းဖွယ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ တနည်းအားဖြင့်သဘာဝ setting ကိုအတွက်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချကိုမှန်ကန်အလုပ်ရှင်များတာဘွဲ့ကြိုတူပြုမူ။ သူတို့အတူတူပင်အကြောင်းပြချက်များအတွက်အလားတူဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်ခဲ့သလား ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့မသိရပါဘူး။ အဆိုပါသုတေသီများကိုယ်စားလှယ်လောင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုရှင်းပြဖို့အလုပ်ရှင်များမေးမြန်းနိုင်ကြဘူး။
စမ်းသပ်ချက်၏ဤစုံတွဲကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်အကြောင်းအများကြီးဖော်ပြသည်။ Lab ကစမ်းသပ်သင်တန်းသားများဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချထားတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်၏စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှုအနီးသုတေသီများကိုဆက်ကပ်။ ဒါကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်ဓါတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုအတွက်, ဆက်စပ်မှုအပေါငျးတို့သကိုယ်ရေးရာဇဝင်တိတ်ဆိတ်တဲ့ setting ကိုဖတ်ရှုခဲ့ကြကြောင်းသေချာစေရန်နိုင်ခဲ့သည်; လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်မှုထဲမှာ, ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အချို့ကိုပင်ဖတ်ပြီမပြုစေခြင်းငှါ။ ထိုဓာတ်ခွဲခန်း setting ကိုအတွက်သင်တန်းသားများကိုသူတို့လေ့လာလျက်ရှိသည်ကြောင်းသိသောကြောင့်နောက်ထပ်, သုတေသီများမကြာခဏသင်တန်းသားများကိုသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချနေကြပါတယ်ဘာကြောင့်သူတို့ကိုနားလည်ကူညီနိုငျသောအပိုဆောင်းဒေတာစုဆောင်းဖို့နိုင်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆက်စပ်မှုမတူညီတဲ့ရှုထောင့်အပေါ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုအတွက်သင်တန်းသားများကိုမေးခဲ့တယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအချက်အလက်များ၏ဒီလိုသုတေသီများသင်တန်းသားများကိုကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပြုမူဆက်ဆံပုံကွဲပြားခြားနားမှုနောက်ကွယ်ကယန္တရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်ကိုကူညီနိုင်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကိုယ့်အားသာချက်အဖြစ်ဖော်ပြဤအတိအကျတူညီဝိသေသလက္ခဏာများလည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်အားနည်းချက်များစဉ်းစားနေကြပါတယ်။ လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်ပိုနှစ်သက်သူကိုသုတေသီများကသူတို့အနီးကပ်လေ့လာလျက်ရှိကြသောအခါဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်အတွက်သင်တန်းသားများကိုအလွန်ကွဲပြားခြားနားပြုမူနိုင်ကြောင်းငြင်းခုန်။ ဘက်လိုက်ပေါ်လာဖို့မသကဲ့သို့ဥပမာ, ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုအတွက်သင်တန်းသားများကိုသုတေသန၏ရည်မှန်းချက်မှန်းဆနှင့်သူတို့၏အမူအကျင့်ပြောင်းလဲခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ ထို့ပြင်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်ပိုနှစ်သက်သူကိုသုတေသီများကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပေါ်သေးငယ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုကိုသာတစ်ဦးအလွန်စင်ကြယ်သောမြုံဓာတ်ခွဲခန်းပတ်ဝန်းကျင်ထွက်ရပ်နိုင်ငြင်းခုန်ခြင်းငှါ, နှင့်အရှင်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်ကိုမှန်ကန်ငှားရမ်းဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်မိခင်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်-ခန့်မှန်းပါလိမ့်မယ်။ အဓိကအားဖြင့်ပညာတတ်အနောက်တိုင်းမှကျောင်းသားများ, စက်မှု, သူဌေးများနှင့်ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံများ: နောက်ဆုံးအနေနဲ့လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်အများအပြားထောက်ခံသူများကလိုက်တယ်သင်တန်းသားများအပေါ်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်မှီခိုဝေဖန် (Henrich, Heine, and Norenzayan 2010) ။ ဆက်စပ်မှုနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကအဆိုပါစမ်းသပ်ချက် (2007) လက်တွေ့ lab ကို-Field စဉ်ဆက်အပေါ်နှစ်ခုအစွန်းသရုပျဖျော။ အဲဒီနှစျခုအစွန်းအကြားမှာတော့ထိုကဲ့သို့သောဓာတ်ခွဲခန်းသို့ Non-ကျောင်းသားများကိုဆောင်ခဲ့သို့မဟုတ်လယ်သို့သွားပေမယ်ဆဲသင်တန်းသားများအနေနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်လုပ်ဆောင်ရှိခြင်းအဖြစ်ချဉ်းကပ်မှုအပါအဝင်စပ်ဒီဇိုင်းများအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
Analog စ-ဒစ်ဂျစ်တယ်: အတိတ်တွင်တည်ရှိသောဓာတ်ခွဲခန်း-Field ရှုထောင်အပြင်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်သုတေသီများယခုစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်ရာတစ်လျှောက်ဒုတိယအဓိကရှုထောင်ရှိသည်သောဆိုလိုသည်။ စင်ကြယ်သောဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်, စင်ကြယ်သောလယ်​​ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်များနှင့်ကြား၌ hybrids တွေကိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်သကဲ့သို့စင်ကြယ်သော Analog စစမ်းသပ်ချက်, စင်ကြယ်သောဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်များနှင့်မျိုးစပ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုတရားဝင်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပူဇော်ဖို့စားမှုဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးအသုံးဝင်သောအလုပ်လုပ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေခံအဆောက်အဦများအသုံးပြုခြင်း, သင်တန်းသားများကိုစုဆောင်း randomize, ကုသကယ်မနှုတ်, နှင့်ရလဒ်တိုင်းတာရန်လုပ်ကြောင်းစမ်းသပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt ရဲ့ (2012) ဤခြေလှမ်းများ၏အားလုံးလေးပါးဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေအသုံးပြုကြောင့် barnstars နှင့်ဝီကီပီးဒီးယား၏လေ့လာမှုတစ်ခုအပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်မှုခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူစွာအပြည့်အဝ Analog စစမ်းသပ်ချက်ဤလေးပါးခြေလှမ်းများ၏မည်သည့်အဘို့အဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေခံအဆောက်အဦများ၏အသုံးလုပ်မစမ်းသပ်ချက်ဖြစ်ကြသည်။ စိတ်ပညာအတွက်ဂန္ထဝင်စမ်​​းသပ်ချက်အတော်များများ Analog စစမ်းသပ်ချက်ဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီနှစျခုအစွန်းအကြားခုနှစ်တွင်အဆင့်လေးဆင့်အဘို့အ Analog စနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ရှိပါတယ်။
ဝေဖန်, ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ကို run ဖို့အခွင့်အလမ်းများဖွင့်အွန်လိုင်းမရှိကြပေ။ သုတေသီများကုသသို့မဟုတ်တိုင်းတာရလဒ်များမကယ်မလွှတ်နိုင်ရန်အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာမှာဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းတွေသုံးခြင်းဖြင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက် run နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သုတေသီများရလဒ်တွေကိုတိုင်းတာဖို့ built ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကုသမှုသို့မဟုတ်အာရုံခံကယ်နှုတ်စမတ်ဖုန်းများအသုံးပြုနိုင်တယ်။ တကယ်တော့ကျနော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာဤအခနျးတှငျမွငျလိမျ့မညျအဖြစ်, သုတေသီများပြီးသားလူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အိမ်ထောင်စုများ၏ 8.5 သန်းနှငျ့ပတျသကျသောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်. စမ်းသပ်ရလဒ်တွေကိုတိုင်းတာရန်အိမ်မှာအာဏာကိုမီတာအသုံးပြုခဲ့ကြ (Allcott 2015) ။ ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်တိုးမြှင့်ကိုတညျဆောကျပတ်ဝန်းကျင်သို့ပေါင်းစည်းဖြစ်လာလူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုနှင့်အာရုံခံကိရိယာများသို့ပေါင်းစည်းဖြစ်လာသကဲ့သို့, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ကို run ဖို့ဤအခွင့်အလမ်းများကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ရုံအွန်လိုင်းစမ်းသပ်ချက်မဟုတ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေကိုဓာတ်ခွဲခန်း-Field စဉ်ဆက်တစ်လျှောက်မှာနေရာတိုင်းမှာစမ်းသပ်ချက်အသစ်ဖြစ်နိုင်ခြေဖန်တီးပါ။ စင်ကြယ်သောဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်ခုနှစ်တွင်ဥပမာ, သုတေသီများသင်တန်းသားများကို '' အမူအကျင့်၏အသေးစိတ်တိုင်းတာဘို့ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေကိုသုံးနိုင်သည်, တိုးတက်လာသောတိုင်းတာခြင်း၏ဤအမျိုးအစားဥပမာတစ်ခုအကြည့်တည်နေရာအတိအကျကိုနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာပေးစွမ်းသောမျက်စိ-ခြေရာခံပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်လည်းအွန်လိုင်းဓာတ်ခွဲခန်းကဲ့သို့စမ်းသပ်ချက်ကို run ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သုတေသီများလျှင်မြန်စွာအွန်လိုင်းစမ်းသပ်ချက် (ပုံ 4.2) အတွက်သင်တန်းသားများကိုစုဆောင်းဖို့အမေဇုံစက်မှု Turk (MTurk) မွေးစားကြပြီ။ MTurk ပိုက်ဆံအဘို့သူတို့အားတာဝန်များကိုဖြည့်စွက်ရန်ဆန္ဒရှိသော "အလုပျသမား" နဲ့ပြီးစီးခဲ့ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးတာဝန်များကိုရှိသည်သောသူ "အလုပ်ရှင်" ကိုက်ညီ။ အစဉ်အလာလုပ်အားစျေးကွက်နှင့်မတူဘဲ, သို့သော်, များသောအားဖြင့်ပါဝင်တာဝန်များကိုသာဖြည့်စွက်ရန်မိနစ်အနည်းငယ်လိုအပ်နှင့်အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားအကြားတစ်ခုလုံးကိုအပြန်အလှန်ကို virtual ဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့-ကသဘာဝကျကျစမ်းသပ်ချက်အချို့အမျိုးအစားများများအတွက်ကိုက်ညီသည်သူတို့မလုပျမယ်လို့တာဝန်များကိုဖြည့်စွက်ဖို့လူအစဉ်အလာဓာတ်ခွဲခန်း-ပေးဆောင်စမ်​​းသပ်ချက်၏ MTurk တုရှုထောင့်လို့ပါပဲ။ အမှန်ကတော့, MTurk သင်တန်းသားများ-စုဆောင်းရေးတစ်ရေကူးကန်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပေးဆောင်များအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦကဖန်တီးထားပါတယ်ပြည်သူနှင့်သုတေသီများသင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးအမြဲရရှိနိုင်ရေကူးကန်သို့အသာပုတ်ပါကအခြေခံအဆောက်အဦများ၏အားသာချက်ယူကြပြီ။
ပုံ 4.2: စာတမ်းများအမေဇုံစက်မှု Turk (MTurk) မှဒေတာများသုံးပြီးထုတ်ဝေသော (Bohannon 2016) ။ MTurk နှင့်အခြားအွန်လိုင်းလုပ်အားစျေးကွက်သုတေသနပညာရှင်များကစမ်းသပ်ချက်အဘို့အသင်တန်းသားများကိုစုဆောင်းဖို့အဆင်ပြေလမ်းကိုဆက်ကပ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်လယ်ပြင်ကဲ့သို့စမ်းသပ်ချက်အဘို့ ပို. ပင်ဖြစ်နိုင်ခြေဖန်တီးပါ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက် (ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်များကဲ့သို့) ဖြစ်နိုင်သမျှယန္တရားများနှင့် (လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်များကဲ့သို့) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်စစ်မှန်သောဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချပိုပြီးကွဲပြားခြားနားသင်တန်းသားများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်မှုနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဒေတာကိုဆက်ကပ်နိုင်ပါသည်။ အစောပိုင်းစမ်းသပ်မှု၏ကောင်းသောဝိသေသ၏ဤပေါင်းစပ်အပြင်, ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်လည်း Analog စဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်အတွက်ခက်ခဲခဲ့ကြကြောင်းသုံးအခွင့်အလမ်းများကိုဆက်ကပ်။
ပထမဦးစွာအများဆုံး Analog စဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်သင်တန်းသားများရာပေါင်းများစွာရှိသော်လည်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်သင်တန်းသားများကိုသန်းပေါင်းများစွာရှိသည်နိုင်။ တချို့ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်သုည variable ကိုကုန်ကျစရိတ်မှာ data တွေကိုထုတ်လုပ်နိုငျသောကွောငျ့စကေးအတွက်ဤပြောင်းလဲမှုသည်။ သုတေသီများသင်တန်းသားများ၏အရေအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်တိုးမြှင့်ပါဘူးတိုးမြှင့်တစ်ခုစမ်းသပ်အခြေခံအဆောက်အဦကဖန်တီးခဲ့ကြတခါဆိုလိုသတည်း။ 100 ကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတဲ့အချက်တစ်ချက်အားဖြင့်သင်တန်းသားများ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ဖွင့်မယ့်အရေအတွက်အပြောင်းအလဲမဟုတ်ပါကစမ်းသပ်ချက် (ဥပမာ, ကုသမှုသက်ရောက်မှုများ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော) မှကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုသင်ယူဖို့သုတေသီများနိုင်ပါတယ်သောကွောငျ့, က, တစ်အရည်အသွေးပြောင်းလဲမှုသည်နှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများကို run ( ဥပမာကြီးမားသောအုပ်စုတစ်စုစမ်းသပ်ချက်) ။ ဒီပွိုင့်ငါဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ဖန်တီးခြင်းအကြောင်းအကွံဉာဏျပူဇျောသောအခါငါအခန်း၏အဆုံးကိုဦးတည်ပြုလုပ်ထံသို့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်, ဒါအရေးကြီးပါတယ်။
ဒုတိယအချက်မှာအများစုက Analog စဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်ချွတ်စွပ်အရွယ်အစား Widgets တွေအဖြစ်သင်တန်းသားများကိုပြုမူဆက်ဆံသော်လည်းဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်မကြာခဏသုတေသန၏ဒီဇိုင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဆင့်ဆင့်အတွက်သင်တန်းသားများနှင့် ပတ်သက်. နောက်ခံသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ။ သူတို့အပြည့်အဝတိုင်းတာပတ်ဝန်းကျင်မှာရာအရပျယူသောကြောင့်, Pre-ကုသမှုသတင်းအချက်အလက်သမုတ်သောဤသည်နောက်ခံသတင်းအချက်အလက်, ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်အတွက်မကြာခဏရရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Facebook ကမှာသုတေသနပညာရှင်ဘွဲ့ကြိုနှင့်အတူတစ်စံဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုဒီဇိုင်းသုတေသီထက်အများကြီးပို Pre-ကုသမှုသတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ်။ ဤသည်ကို pre-ကုသမှုသတင်းအချက်အလက်ချွတ်စွပ်အရွယ်အစား Widgets တွေအဖြစ်သင်တန်းသားများကိုကုသ ကျော်လွန်. ရွှေ့ဖို့သုတေသီများနိုင်ပါတယ်။ ပိုများသောအထူးသ, Pre-ကုသမှုသတင်းအချက်အလက်များအားပိတ်ဆို့ခြင်းအဖြစ်ပိုမိုထိရောက်သောစမ်းသပ်ထိုကဲ့သို့သောဒီဇိုင်းများ-နိုင်ပါတယ် (Higgins, Sävje, and Sekhon 2016) နှင့်သင်တန်းသားများ၏ပစ်မှတ်ထားစုဆောင်းမှု (Eckles, Kizilcec, and Bakshy 2016) ပိုပြီးအမြင်သုံးသပ်ချက်-ထိုကဲ့သို့သောသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော၏ခန့်မှန်းချက်အဖြစ်ကတညျး ကုသသက်ရောက်မှုများ၏ (Athey and Imbens 2016a) နှင့်တိုးတက်လာသောတိကျဘို့ covariate ညှိနှိုင်းမှု (Bloniarz et al. 2016) ။
မြားစှာသော Analog စဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတော်လေးချုံ့ငွေပမာဏအတွက်ကုသမှုနှင့်တိုင်းတာရလဒ်များကယ်နှုတ်သော်လည်းတတိယအချက်, အခြို့ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်အချိန်အပ်နိုင်ပြီးသက်ရောက်မှုလည်းအချိန်နှင့်အမျှတိုင်းတာနိုင်ကုသပါဝငျသညျ။ ဥပမာအားဖြင့်, Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt ရဲ့စမ်းသပ်မှု 90 နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့စဉ်တိုင်းတာရလဒ်ကိုရှိပါတယ်, နှင့်စမ်းသပ်ချက်တယောက်ကိုယ့်အကြောင်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်သင်ပြောပြလိမ့်မယ်အခန်းအတွက် (Ferraro, Miranda, and Price 2011) မျှအခြေခံအားဖြင့်မှာ3နှစ်ကျော်ကရလဒ်များခြေရာခံ ကုန်ကျစရိတ်။ ဤသုံးပါးအခွင့်အလမ်းများကို-အရွယ်အစား, Pre-ကုသမှုသတင်းအချက်အလက်နှင့်စမ်းသပ်ချက်တိုင်းတာရေးစနစ်များအမြဲ-on ရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာ run ကြသောအခါ longitudinal ကုသမှုနှင့်ရလဒ်ကိုအသုံးအများဆုံးအချက်အလက်များမှာ (အမြဲ-အပေါ်တိုင်းတာခြင်းစနစ်များကိုပိုမိုများအတွက်အခန်း2ကိုကြည့်ပါ) ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်အများအပြားဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆက်ကပ်နေစဉ်, သူတို့လည်း Analog စဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူအချို့သောအားနည်းချက်များမျှဝေ။ ဥပမာအားဖြင့်, စမ်းသပ်ချက်အတိတ်လေ့လာဖို့ဖို့အသုံးပြုမရနိုငျ, သူတို့သာခြယ်လှယ်နိုင်ကုသမှု၏သက်ရောက်မှုခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ စမ်းသပ်ချက်မူဝါဒကိုလမ်းပြခြောအသုံးဝင်ပေမဲ့လည်း, သူတို့ပေးနိုင်အတိအကျလမ်းညွှန်မှုသောကွောငျ့ဤကဲ့သို့သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှီခိုသောရောဂါများ, လိုက်နာမှုပြဿနာများနှင့်မျှခြေသို့အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတန်ငယ်ကန့်သတ်သည် (Banerjee and Duflo 2009; Deaton 2010) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးထိုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများချီးမြှင့်။ လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်များထောက်ခံသူများကမသိမသာနှင့်ကျပန်းလူသန်းပေါင်းများစွာဖွငျ့လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များသို့ကြားဝင်စွက်ဖက်ရန်သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုကွား။ ဤအင်္ဂါရပ်အချို့သောသိပ္ပံနည်းကျအားသာချက်များကို ပူဇော်. , ဒါပေမဲ့သူတို့လည်း (သုတေသီများအကြီးအကျယ်စကေးအပေါ် "ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်" ကဲ့သို့လူကုသအဖြစ်ကအကြောင်းထင်) လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက် Ethics ရှုပ်ထွေးတဲ့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ (Restivo နှင့်ဗန် der Rijt လည်းအများအပြား barnstars ပေး၏လျှင်ဥပမာဝီကီပီးဒီးယားရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်အားနှောင့်ယှက် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ) ကိုထပ်မံကြောင့်သူတို့ရဲ့စကေး၏သင်တန်းသားများဖြစ်နိုင်သောပျက်ဆီး, ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်, အပြင်လည်းလူမှုရေးစနစ်များအလုပ်လုပ်များ၏ပြတ်တောက် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဘော်ဖန်ဆင်းနိုင် ။